ရန်ကုန်ကို လော့ဒေါင်းချလိုက်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လဲ? (လော့ဒေါင်းဟာ ကူးစက်မှုကို တကယ်နှိမ်နင်းနိုင်မှာလား) - Zet Star
ရန်ကုန်ကို လော့ဒေါင်းချလိုက်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လဲ? (လော့ဒေါင်းဟာ ကူးစက်မှုကို တကယ်နှိမ်နင်းနိုင်မှာလား)
ပြည်သူတွေက ရန်ကုန်ကို ဘာလို့ လော့ဒေါင်း လုပ်စေချင်တာလဲ ။
အစိုးရ ရဲ့ Stay Home အမိန့်မှာ အစိုးရအလုပ် ကုမ္ပဏီ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ အရောင်းဆိုင် များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသောသူများမပါလို့ရေးထားပါတယ် ။ ရခိုင်မှာလည်း Stay Home အမိန့်ထုတ်တယ် ရန်ကုန်မှာလည်း Stay Home အမိန့်ထုတ်တယ် ရခိုင်က ပိုးကူးဆက်မှူ ရပ်တန့်သွားပြီး ရန်ကုန်က ပိုးကူးဆက်မှု မြင့်တက်နေဆဲ ဘာကွာလဲ ။ ကွာပါတယ် ။ ရခိုင် ဟာ နယ်မြို့ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်က စီးပွားရေး မြို့တော်ပါ ။
ရခိုင်တင်မက တခြားပြည်နယ်တွေမှာ ကိုဗစ်ကူးဆက်မှုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ အဒီ မြို့ အဒီအရပ်ဒေသကလူတွေက အပြင်မထွက်ကြတော့ဘူး ။ အကုန်လုံးနီးပါး ကိုယ့်အိမ်မှာကိုပဲ အေးအေးဆေးဆေး နေကြတယ် ။ အပြင်ထွက်ဝယ်စရာရှိရင်လည်း ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ခပ်သုပ်သုပ်ထွက်ဝယ် ပြန်လာ ဒါပဲ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် နယ်မြို့တွေမှာက အစိုးရအလုပ်သမား ကုမ္ပဏီအလုပ်သမားဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရပြီး အားလုံးက ကုန်သည် ကုန်စုံဆိုင် နဲ့ သီးသန့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လယ်ယာကိုင်းကျွန်းလုပ်တဲ့အခါ ကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုပိတ် ဆိုင်တွေပိတ် အိမ်ထဲမှာ တခါးပိတ်ပြီး နေကြပါတယ် ။
ရန်ကုန်ကတော့ တနိုင်ငံလုံးနဲ့ တခြားစီပါ ။ Stay Home အမိန့်မှာ အလုပ်သွားသူများ မပါဝင်ပါလို့ ထည့်ရေးထားတဲ့အခါ အလုပ်ရှင်တွေက ဘယ်အလုပ်သမားကိုမှ အလုပ်ပျက်ခွင့်မပေးပါဘူး ။ Work From Home ဆိုတာ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အဆင်မပြေပါဘူး ။ အဒီမှာ အလုပ်သမားတွေက အလုပ်တွေ ကုမ္ပဏီတွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ စက်ရုံတွေ အလုပ်ရုံတွေကို ငြင်းပယ်ခွင့်မရှိပဲ တက်ရပါတယ် ။ အလုပ်သွားတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိကြတဲ့အခါ အများပြည်သူသုံး Busကား ရထား ဖယ်ရီ ကြိုပို့ယာဥ်တွေကိုပဲ အားကိုးပြီး စီးရပါတယ် ။ သူတို့လည်း ပိုးကူးခံပြီး ဘယ်စီးချင်ပါ့မလဲ ။
ဒါပေမယ့် အစိုးရ ရဲ့ Stay Home က သူတို့အတွက် အကျုံးမဝင်တဲ့အခါ အိမ်မှာနေပါ အိမ်ပြင်မထွက်ကြပါနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားဟာ မှီခိုတွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘောစိတွေ လူလွတ်တွေ အတွက် မှန်ကောင်းမှန်နေမယ် သူတို့အတွက်ကတော့ ဘာဆိုဘာမှကို မထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိတဲ့ အမိန့်တခုအပြင်မပိုဘူး ။ အလုပ်ရုံတွေ စက်ရုံတွေ ကုမ္ပဏီတွေ လုပ်ငန်းတွေ မပိတ်တဲ့အခါမှာ လူတွေက အပြင်ထွက်လာရတယ် လမ်းပေါ်တက်ရတယ် ။ ကူးလူးဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်ရတယ် ။
ကုမဏီကနေ အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါ အိမ်ကမိသားစုနဲ့ ပြန်လည်ထိတွေ့ရတယ် ။ အဒါကြောင့် အစိုးရ ရဲ့ Stay Home အမိန့်ကြီးကို ဘယ်လောက်လိုက်နာတဲ့ မိသားစုဝင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မိသားစုထဲကတယောက် အပြင်မှာထွက် အလုပ်လုပ်နေရပြီဆိုတာနဲ့ သူဟာ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ ကူးလူး ဆက်ဆံနေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာ သူ့ဆီမှာပိုးပါလာရင် တမိသားစုလုံး Stay Home တာဟာလည်း သဲထဲရေသွန်သလို ဘာမှမထူးခြားပဲ အကုန်ကူးသွားကြတာပဲဆိုတာ ယနေ့ ရန်ကုန်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေက သက်သေပြနေပါတယ် ။
ယနေ့အထိ ရန်ကုန်မှာ ပိုးတွေ့လူနာ ၃၀၀၀ ကျော်ဆိုတာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့ လူနာစာရင်းသာဖြစ်ပြီး လုံးဝမသိပဲ လွတ်နေတဲ့ ပိုးရှိလူနာစာရင်းက အဆများစွာ ရှိနေမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဒါကြောင့် အစိုးရ ရဲ့ Stay Home အစီအစဥ်ဟာ တခြားတိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်တွေအတွက် သင့်တော် အဆင်ပြေ ထိရောက်မှု ရှိရင်ရှိမယ် ရန်ကုန်အတွက်ကတော့ သောက်ဆေးကော ထိုးဆေးပါ မှားပေးမိပြီး အသက်ငင်နေရတဲ့ လူနာလို ဖြစ်နေပြီဆိုတာ အားလုံးက သတိထားမိလာကြပါပြီ ။
ဘာလို့ ၁၄ ရက် Lock Down လုပ်စေချင်လဲ ။ တကယ်လို့သာ အားလုံးကို ရပ်ချလိုက်ပြီး အပြင်မထွက်ရ အမိန့် ထုတ်နိင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီတွေ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ မသွားမဖြစ်သွားနေရတာတွေ အားလုံး မပိတ်လို့မရတော့ပါဘူး ။ အဒါဆို လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ မရှိတော့ပဲ အိမ်မှာပဲ နေကြရတော့မှာ ။
ဒီလို ၁၄ ရက် အိမ်မှာ နေရခြင်းဖြငိ့ ရလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက ကိုယ်က ပိုးကူးခံထားရတဲ့လူနာဆိုရင် ၁၄ ရက် အိမ်မှာနေလိုက်ရတဲ့အတွက် ဖောင်ကြီး ၁၄ ရက်နေသလိုဖြစိပြီး ဒေါ်ခင်ခင်ကြီး ပြောတဲ့ WHO စာတမ်းတွေအရ ၁၄ ရက် လော့ဒေါင်း ပြီးလို့ အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာ အခြားသူကို ကူးဆက်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါဘူး ။ သူ့မှာတော့ ပိုးရှိချင်ရှိနေမယ် ဒါပေမယ့် အခြားသူတွေ သူနဲ့ထိတွေ့မိမယ့်သူတွေဟာ သူ့ကြောင့် ပိုးကူးဆက်နိုင်ခြေမရှိတော့တဲ့အခါ ပိုးကူးဆက်နှုန်းက လုံးဝကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု ပိုးတွေ့လူနာစာရင်း မြင့်တက်လာရတာဟာ ကိုယ့်မှာ ပိုးကူးနိုင်ခြေရှိတဲ့ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ အခြားသူတွေကိုဆက်ကူး အခြားသူကလည်း အပြင်ထွက်ရတဲ့အခါ နောက်လူကိုဆက်ကူးနဲ့ အကုန်လုံး ပတ်သတ်ကူးတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်ကုန်ပြီး တားလို့ဆီးလို့မရတော့တဲ့အနေအထားပါ ။ နောက်တချက်က ပိုးတွေ့လူနာ များလာတာနဲ့အမျ အဖိတ်အစင်လည်း ပိုပြီးများလာမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အခုပဲ တနေ့ကို လူ ၁၀ယောက်ဝန်းကျင်က ကိုဗစ်နဲ့ သေဆုံးနေရပြီး Medical Workers ၂ ယောက်ပါ သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။
အဒါကြောင့် ရန်ကုန်ကိုသာ သေသေချာချာ လော့ဒေါင်း ၂ ပတ် ချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဒီ ၂ ပတ်အတွင်း ကူးဆက်လူနာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း အလုပ်ကိုပဲ အားစိုက်ထုတ်စရာလိုတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ၂ ပတ်ရဲ့ အကျော်မှာ ပိုးရှိလူနာတွေဟာ အခြားသူကို ကူးဆက်ဖို့အချိန်ကျော်လွန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် စင်ကာပူရဲ့ Circuit Breaker အစီအစဥ်လိုပဲ ပိုးကူးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ၁၄ ရက်ကို Break လုပ်လိုက်သလို လော့ဒေါင်း အစီအစဥ်ကို အသားကုန်တောင်းဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ပိတ်ဆို့မှုဟာ မကောင်းဘူးဆိုရင် ဝူဟန်လိုမျိုး ဒီနေ့အောင်ပွဲခံနေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေ တက်လာစရာ အကြောင်းကို မရှိတာပါ ။ ပြည်သူကို တကယ်ငဲ့တယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်ကို လော့ဒေါင်း လုပ်ဖို့ အချိန်ကျပါပြီလို့ပဲ….
← အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောနေကြတဲ့ ရိုးမရိပ်သာရဲ့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ရှင်းပြလိုက်တဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦး
ပညာတတ်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာနဲ့ လမ်းဘေးက ပလာတာသည်ကြီးတို့ တွေ့ကြလေသောအခါ →